China Ringlock ငြမ်းစက်ရုံနှင့်ထောက်ပံ့သူများ | Zhongming
Luowen Ring Lock Scaffolding သည်လက်ကိုင်သစ်အမျိုးအစားဖြစ်ပြီးအဓိကအားဖြင့် Ring plate၊ စံ၊ ledger, brace နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး၎င်းသည်၎င်း၏အားသာချက်များနှင့်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ကမ္ဘာ့စျေးကွက်တွင်အလွန်ကြိုဆိုသည်။
1. ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံ - အဓိကအစိတ်အပိုင်းများတွင်စံ၊ လယ်ဂျာ၊ တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူပြီးသိုလှောင်ရန်၊ လွှဲပြောင်းရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းရန်လွယ်ကူသည်။
2. တည်ဆောက်ခြင်းအတွက်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် - လက်စွပ် ၈ ခုရှိပါတယ်။ ဒီတော့လယ်ဂျာနှင့်သတ္တုအထိမ်းအချုပ်သည်မည်သည့် ဦး တည်ချက်နှင့်မည်သည့်ပုံစံကိုမဆိုလက်စွပ်ထဲသို့ထည့်နိုင်သဖြင့်ဆောက်လုပ်ရေး၏မည်သည့်တောင်းဆိုချက်ကိုမဆိုရရှိနိုင်သည်။
3. Multult အသုံးပြုခြင်း - တိကျသောဆောက်လုပ်ရေးအရ Ring-Lock Scaffolding ကိုအရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိသည့်တစ်တန်း၊ နှစ်တန်းသို့တပ်ဆင်နိုင်ပြီး၎င်းကို multi frame ဆောက်လုပ်ရေး tools များ၊ support frame, support column၊ ပံ့ပိုးမှု, etc
၄။ မြင့်တင်ခြင်း - စံသည် axially ဖြင့်ပြုသည်။ ၎င်းသည်သုံးဖက်မြင်အာကာသအတွင်း၊ ငြိမ့်ညောင်းခြင်းနှင့်တည်ဆောက်ပုံ၏တည်ငြိမ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ Ring ring သည် axial shearing ကိုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းကြောင့် pip တစ်ခုစီ၏ဝင်ရိုးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ၁၅% ခွန်အားနှင့်မှန်မှန်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေပါတယ်။
၅. ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း - Luowen သစ်သားများသည်အဆင့်မြင့်သံမဏိများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့်ပျက်စီးရန်လွယ်ကူသည်သို့မဟုတ်ပုံသဏ္outာန်မရှိသောကြောင့်၎င်းကိုထပ်ခါတလဲလဲသုံးနိုင်သည်။
Ringlock ငြမ်းသည်အသစ်စက်စက်အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး ၁၉၈၀ ပြည့်နှစ်များတွင်ဥရောပမှစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး cuplock ငြမ်းပြီးနောက်အဆင့်မြှင့်တင်ထားသောထုတ်ကုန်ဖြစ်သည်။ rosette ငြမ်းစနစ်၊ plug-in ငြမ်းစနစ်၊ အလွှာဘောင် (အလွှာဘောင်၊ ဤငြမ်း၏အခြေခံနိယာမကိုဂျာမန် LAYHER ကုမ္ပဏီတီထွင်သောကြောင့်လူသိများသည်။ Ringlock ဘက်စုံအသုံးပြုနိုင်သောသစ်ထုတ်လုပ်ခြင်းသည် cuplock ငြမ်းပြီးနောက်အဆင့်မြှင့်ထားသောထုတ်ကုန်ဖြစ်သည်။ သစ်တောများ၊ အချင်း ၁၃၃ မီလီမီတာနှင့်အထူ ၁၀ မီလီမီတာရှိသည့်စံချိန်မှီ rosettes ။ အပေါက် ၈ ခုရှိသည်။ အဓိကအစိတ်အပိုင်းသည် *48 * 3.5mm နှင့် Q355 သံမဏိပိုက်ဖြစ်သည်။ စံသတ်မှတ်ထားသောသံမဏိအရှည်တစ်ခု၏ 0.5m တိုင်းတွင် rosette နှင့်ဂဟေဆော်ထားသည်။ ဤ ၀ တ္ထုနှင့်လှပသောချိတ်ဆက်ထားသောခတ်သောဒစ်ဂျက်သည်အောက်ခြေတွင်ချိတ်ဆက်ထားသည့်လက်တစ်ခုရှိသည်။ ခြေထောက်ကိုသံမဏိပိုက်၏နှစ်ဖက်စလုံးတွင်တံသင်များဖြင့်တံဆိပ်ခတ်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်သည်။
ငြမ်း Adjustable ဝက်အူဂျက်, Ringlock ငြမ်းအစိတ်အပိုင်းများ, Ringlock ငြမ်းကွင်းခတ်, Kwikstage ငြမ်းဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, အကြီးစား Duty Ringlock ငြမ်း, သတ္တု Cuplock ငြမ်း,